သံစဉ်လှိုင်း ဘလော့ဂ်လေးကို လုပ်ထားတာကတော့ ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်လကတည်းက ဖြစ်ပါတယ်. ကျွန်တော် youtube မှာ အပျင်းပြေ သီချင်းလေးတွေ နားထောင်နေရင်းက ကိုယ်ကြိုက်တဲ့သီချင်းလေးတွေကို တစ်နေရာမှာ စုထားရင် ကောင်းမယ်ဆိုပြီး ကျွန်တော်ကြည့်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ youtube video လေးတွေကို စုဆောင်းခဲ့ပါတယ်. နောက်ပိုင်းမှာ တစ်ခြားသူတွေကိုပါ ကြည့်လို့ရအောင်ဆိုပြီး Contributors တွေ ပါဝင်ရေးသားဖို့ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်.
အဲဒီ့နောက်မှာတော့ မြန်မာပြည်တွင်းက youtube ကို access လုပ်လို့မရတဲ့သူတွေပါ ကြည့်လို့ရအောင်၊ နားထောင်လို့ရအောင်ဆိုပြီး သီချင်းလေးတွေကို ဒေါင်းလုပ်ချ၊ File Hosting မှာ upload ပြန်လုပ်ပြီး သီချင်းစာသားလေးတွေကိုပါ တတ်နိုင်သလောက် ပါအောင် ထည့်စေခဲ့ပါတယ်.
အောင်မြင်တယ်၊ မအောင်မြင်ဘူးဆိုတာကိုတော့ ကျွန်တော်မပြောတတ်ပါဘူး. ဒါပေမယ့် အတိုင်းအတာတစ်ခုထိတော့ လက်ခံအားပေးမှု ရခဲ့ပါတယ်. နောက်ပိုင်းမှာတော့ မကြီးကြပ်နိုင်တော့တာက တစ်ကြောင်း၊ ပါဝင်ရေးသားနေတဲ့ Contributors များမှာလည်း မအားလပ်ပုံရတာက တစ်ကြောင်းတို့ကြောင့် ဘလော့ဂ်လေးက အရှိန်သိပ်မရတော့သလိုဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်.
ကျွန်တော် သိချင်တာက ဒီဘလော့ဂ်လေးကို ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ ဆက်လုပ်သင့်သလဲ.
(၁) သီချင်းတွေ ဝေမျှနေတာ ကော်ပီရိုက် ထိနိုင်သလား. တစ်ခြားဆိုက်တွေလည်း ဝေမျှနေကြတာပါပဲ. ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့က အဲဒီ့လိုမျိုး အနုပညာရှင်တွေကို မလေးမစားလုပ်သလို ဖြစ်သွားမိမှာကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သလား. ဒါဆိုရင် ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ ဒီဆိုက်လေးကို ဆက် run မလဲ?
(၂) ဘလော့ဂ်အနေနဲ့ပဲ ထားသင့်သလား၊ ဘလော့ဂ်ဆိုရင်လည်း Blogger နဲ့ကောင်းမလား၊ Wordpress နဲ့ ပိုသင့်တော်မလား. Website လေးတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းသင့်သလား.
(၃) ဘာတွေ ဆက်ထည့်သင့်သလဲ. တစ်ပတ်စာ ရွေးချယ်ချက်လေးတွေ တင်ပေးထားသင့်သလား. ဥပမာ. Countdown 20 of this week ဆိုပြီး သီချင်း ၂၀ ရွေးချယ်တင်ပေးထားတာမျိုး..
ဥပမာ ဆွေးနွေးပြတာပါ. ပရိသတ်ရဲ့ အကြံဥာဏ်လေးတွေကို သိပါရစေ...
ပါဝင်ရေးသားကူညီပံ့ပိုးပေးလိုသူများ ရှိခဲ့ရင်လည်း aungyan@gmail.com ကို ဆက်သွယ်ပေးပါ..
Posted by Yan at 11:12 PM2comments:
အကြင်နာအကြည့်တွေရဲ့  အကြောင်း
Song: အကြင်နာအကြည့်တွေရဲ့  အကြောင်း
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ယောင်္ကျားလေးတစ်ယောက်က ချစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ဖွင့်မပြောရဲ၊ မသိချင်ယောင်ဆောင်နေတာတွေကို ခံစားရေးသား သီဆိုထားတဲ့ သီချင်းလေးပါ။ ဒီသီချင်းကို ကိုယ် သိပ်.....ချစ်နေတဲ့ ကောင်မလေးကို ခံစားသီဆို လိုက်ရင် ကောင်မလေးက သနားပြီး ပြန်ချစ်ရလောက်အောင် သီချင်းစာသားနဲ့ တီးလုံးက ကိုက်ညီ သီကုံးရေးသား ဖွဲ့ဆိုထားပါတယ်။
Posted by ကိုဖိုးတရုတ် at 12:58 AM No comments:
Song: ငယ်ချစ်ဟောင်းနဲ့ စောင်းအိုရှင်
Posted by Yan at 10:14 PM No comments:
Posted by Yan at 10:12 PM No comments:
ချစ်မေတ္တာတွေသည် ညွှန်းစာနွဲ့ ဖွဲ့လို့မမီ...
Posted by Yan at 10:32 PM No comments:
Vocalist: R ဇာနည်
Song: ခွင့်ပြုတယ် ခွင့်လွှတ်တယ်
Posted by Winkabar at 9:11 PM No comments:
Labels: R ဇာနည်
Song: ကိုယ်.. မညာတော့ဘူး
Posted by Winkabar at 9:07 PM No comments:
Vocalist: L ဆိုင်းဇီ
Posted by Winkabar at 8:57 PM No comments:
Labels: L ဆိုင်းဇီ
ပြီးဆုံးသွားခဲ့တဲ့ တစ်နေ့နေ့တော့ ရောက်မယ်
မျှော်ရီကာ စောင့်ရက် တစ်နေ့နေ့တော့ရောက်မယ်
မေ့မရပါ တို့နှစ်ယောက်အတူ ပြုံးပျော်ခဲ့တဲ့ည
တေးသီချင်းများသီကာ တောင်ပေါ်ရိုးရာ ဓလေ့အကနဲ့
တောင်ပေါ်ရွာမှာ စောင့်မျှော်နှင့်ကွယ်..} ၂
Posted by Winkabar at 9:42 PM No comments:
မောင်ရဲ့ အချစ်သံစဉ်များလည်း အခုဆိုပျောက်ဆုံးပြီ
ကြင်နာတတ်လေသူ စိမ်းရက်ခဲ့ပြီလား.. မမျှော်လင့်မိခဲ့
ဒီမှာမျက်ရည်တွေ လှိုင်းတံပိုးများ ပြင်းထန်မြစ်တစ်စင်းဝယ်
ပူလောင်မှုတွေထဲ ထားရက်ခဲ့ပြီလား.. မမျှော်လင့်မိခဲ့
ဒါပေမဲ့ အချစ်စိတ်တွေ မောင့်အတွက်ရှင်သန်ဦးမယ်..
Posted by Winkabar at 11:53 AM No comments:
Vocalist: ဟဲလေး + မေစံပယ်ညို
Vocalist: ဟဲလေး + ဖြူဖြူကျော်သိန်း
Vocalist: ဟဲလေး + ရွှေထိုက်
Song: ခရေပင်လမ်းလေး... သို့
Vocalist: ဟဲလေး + ရတနာမိုင်
Vocalist: ဟဲလေး + ဇမ်းနူး
Vocalist: ဟဲလေး + မမ
Vocalist: ဟဲလေး + D ယံ + အစ္စဏီ
Posted by Winkabar at 6:52 AM No comments:
Labels: မမ, ဖြူဖြူကျော်သိန်း, ရတနာမိုင်, ဟဲလေး, မေစံပယ်ညို, ရွှေထိုက်
တားဆီးခွင့်မရှိ တို့အားနည်းချက်က သိပ်ချစ်နေလို့
( မင်းရှိတဲ့အချိန် အဆုံးအစမဲ့ပျော်ဖူးခဲ့
တို့အားနည်းချက်က သိပ်ချစ်နေလို့ ) ၂
Posted by Winkabar at 7:53 PM No comments:
Vocalist: ဟဲလေး + ခင်ဘုဏ်း
အိမ်ထဲကစီးတဲ့ ရေအတွက် ဆည်တဲ့ကန်သင်းမျိုးလေး
အကျိုးဆက်က ဒီမှာ ကျွန်တော်ရှာတွေ့တဲ့ရည်းစားလေး..
အရွယ်မလွန်ခင်လေး အဖေခိုင်းဖို့ သားသမက်ရွေး
တကယ်ထက်ထက်မြက်မြက် ကောင်လေး ငယ်ငယ်တစ်ယောက်လောက်ဟေ့
ဗေဒင်တွေမေး ကျွန်မ အမျိုးသားကောင်းကိုရွေး
ကျွန်မရဲ့ အစီအစဉ်တွေမှာ အချစ်စိတ်မပါဘူးလေ
မင်းနဲ့ မတွေ့ခင်မှာ မာနကြီးတဲ့မင်းသမီးလေး..
ကျွန်မရူးခဲ့ဖူးတဲ့ စိတ်ကူး အရည်ပျော်မူးယစ်ခဲ့
ကျွန်မအတွက်ဆိုရင် မောင်ဟာ ပြိုင်ဘက်ကင်းတဲ့ မင်းသားလေး
ဒီလိုနဲ့ပဲ.. စိတ်ကူးနဲ့ လက်တွေ့လွဲ.
အိမ်တွင်းမှုအချက်အပြုတ် ကျွန်တော်ပဲ ပါရမီဖြည့်ဖြစ်ခဲ့.
ဒီလိုနဲ့ပဲ.. အိမ်ကပ်တဲ့ မောင့်ကိုယ်စား.
Posted by Winkabar at 8:41 PM No comments:
Labels: ခင်ဘုဏ်း, ဟဲလေး
Vocalist: ဟဲလေး + ပို့ပို့
Song: ဆောရီး အချစ်ရယ်
မှားသွားမှန်းလည်း ကိုယ်သိတယ် မင်းနဲ့ချစ်နေတုန်းပဲ
အဲဒီအတွက်ကွယ် ကိုယ့်ရဲ့ အသည်းကိုလျော်ကြေးပေးမယ်
စွဲလမ်းခြင်းနဲ့ ချစ်တယ် လို့ ကိုယ်ပြောခဲ့တယ်
မင်းက မေးခွန်းထုတ်တော့ ကိုယ့်မှာချာချာလည်...
အစကတည်းက အချစ်ကို မခံစားတတ်ခဲ့မှန်း သိခဲ့ရင်
မင်းကို လုံးဝ လုံးဝ ဖွင့်ပြောမှာမဟုတ်ဘူး..
အဲဒီအတွက်ကွယ် ကိုယ့်ရဲ့အသည်းကို လျော်ကြေးပေးမယ်
မင်းစကားတွေယုံကြည်မိတဲ့ အရှုံးများအတွက် ဘာပြန်ပေးမလဲ
မင်းက မေ့လိုက်တော့မှ ကိုယ့်မှာအဖြေပေါ်ခဲ့ပြီ အချစ်ရယ်.
အစကတည်းက အချစ်ကို မခံစားတတ်ခဲ့မှန်း သိခဲ့ရင်
မင်းကို လုံးဝ လုံးဝ ဖွင့်ပြောမှာမဟုတ်ဘူး..
နောက်ထပ်လည်း မချစ်တော့ဘူး.. ဘယ်သူ့မှလည်း မချစ်တော့ဘူး..
Posted by Winkabar at 8:12 PM No comments:
မြ၀တီကလာတဲ့ Melody World ဆိုတဲ့ ပြိုင်ပွဲ က ထုတ်တဲ့အခွေပါ။ ပြိုင်ပွဲ ရဲ့ level 3,4,5 တွေကနေ ဆုရတဲ့ လူတွေဆိုထားတာပါ။ သီချင်းရဲ့စာသားတွေတော့ မပါဘူး။ လိုချင်ရင်တော့ comment မှာရေးခဲ့ပေါ့နော်။ အခုတော့နည်းနည်းအချောင်ခိုလိုက်ဦးမယ်။ :P ။
1) Vocalist: ခိုင်ရွှေဝါ
2) Vocalist: သူရ၀င်း+မိမိုးမိုးဦး
3) Vocalist: အိအိမွန်
4) Vocalist: နောင်နောင်
5) Vocalist: ချမ်းချမ်း
6) Vocalist: ရေဗက္က၀င်း
7) Vocalist: နန္ဒာ
8) Vocalist: ထက်နေခြည်
9) Vocalist: မိုးစက်
10) Vocalist: မချစ်နဲ့တော့
11) Vocalist: ချမ်းချမ်း
12) Vocalist: နောင်နောင်+နန္ဒာ
13) Vocalist: ကိုကိုမောင်
14) Vocalist: ၀င့်လွင်လွင်သိန်း
Posted by Winkabar at 4:37 PM No comments:
Labels: Melody World
Posted by Soe Mya Nandar Thet Lwin (Borros Roxo) at 11:00 AM No comments:
Posted by Soe Mya Nandar Thet Lwin (Borros Roxo) at 3:36 AM No comments:
Labels: Jame Blunt
I think I love you (Korea Song)
Vocalist: Full House OST
Eo-neu-saen-ka na-mam ki-peun ko-se
A-ju-kau-ke cha-ri-ja-beun keu-dae-ei mo-seum-eul i-je
Wae mot-bwat-jyo pa-ro a-pin-de oh yea
Keu do-ngan i-reo-ke pa-ro nae
Sa-ra-ngi po-i-neun keon-ji
Posted by Yan at 10:29 PM No comments:
Labels: FullHouse, Korea Songs
တစ်ခါတုန်းက လေးဖြူ ရဲ့ နာမည် ကြီးခဲ့တဲ့ နှင်းဆီဝင်္ကပါ မူရင်း သီချင်းလေးပါ .....
Posted by သွင်မောင် at 11:34 AM No comments:
You Give A love Bad Name
Vocalist: Bon Jovi
Posted by သွင်မောင် at 11:27 AM No comments:
Song: Bed Of Roses
Posted by သွင်မောင် at 11:14 AM No comments:
Vocalist: J.Bon Jovi
တစ်ခါတုန်းက ဇော်ဝင်းထွဋ် နာမည် ကြီးခဲ့တဲ့ ကန္တာရခရီးသည် မူရင်း သီချင်းလေးပါ .....
Posted by သွင်မောင် at 9:44 AM No comments:
Posted by Pyiet Oo Aung at 12:37 PM 1 comment:
I just try for how to creat slide show
Posted by Welcome Asean to Myanmar at 11:06 AM No comments:
Vocalist: София Ротару и Николай Басков
Song: Лаванда (Lavanda in Russian)
တို့တွေ ချစ်ကြသလား၊ မချစ်ကြဘူးလား မသိကြဘူးနော်။
လာဗန်းဒါး၊ တောင်ပေါ်ပန်းလေး လာဗန်းဒါ
နှစ်တွေဘယ်လောက်ကြာကြာ၊ မင်းရယ်ငါရယ်ကတော့ သတိရနေကြမယ်။
နွေရာသီက တို့ကို အနွေးဓာတ်ကိုပေးတယ်လေ၊
အဖြေက ရှိလည်းမရှိခဲ့ဘူး၊ သိလည်းမသိဘူး။
Posted by ဇနိ at 3:24 AM No comments:
Labels: Nikolai Baskov, Sofia Rotaru
ရင်ခုန်သံ သီချင်းလေးများစွာ ရင်မှာမွေးဖွား ဖူးပွင့်လာတယ်
သံစဉ်တွေ ပြောင်းလဲသွားလည်း ဘယ်ခါမပြောင်းလဲ
မင်းအနားမှာ ဒီသီချင်းလေး အမြဲတမ်းဆက်ဆိုမယ်
ဒီသီချင်းလေးတွေ မင်းအတွက် အို
Posted by Winkabar at 7:06 PM No comments:
Labels: Melody World, ချမ်းချမ်း
ဒီထက်ပိုရင်ခုန်ရင် ဒီထက်ပို ကြေကွဲခြင်းနဲ့တို့တွေ့ရလိမ့်မယ်
တို့နီးစပ်ဖို့သိပ်ခက်နေတယ် ဒီအချိန်မှာ ဘ၀ခရီးသစ်ဆက်ကြမယ်
မဆိုင်သူတွေလိုနေမယ် နင်ကြင်နာရင်လည်း မချစ်နဲ့
Posted by Winkabar at 6:59 PM No comments:
Labels: Melody World, ကိုကိုမောင်
သေချာနားထောင်ကြည့်မှ ကျွန်တော်လဲကြိုက်သွားတာဗျို့ ။ သေချာနားထောင်စေချင်တယ်
Posted by ရက်ရာဇာ at 3:43 AM No comments:
Vocalist: ဟဲလေး။ အစ္စဏီ။ ဒီယံ။
မမျှော်လင့်ပဲ ဇွတ်ချစ်မိတာ နင်ပါ...
မျှော်လင့်ခြင်း အဆုံးမသတ်သူဟာ နင်ပါ...
အနွံတာခံပြီး ချစ်ပြပါ့မယ် ယုံပါ...
သိချင်သေးရင် သီချင်းဆုံးအောင် နားထောင်လိုက်နော် =]
Posted by Z at 1:38 PM No comments:
Labels: ဒီယံ, ဟဲလေး, အစ္စဏီ
Posted by Phyo Maw at 4:20 AM No comments:
Posted by Htet Arkar Soe at 6:21 AM No comments:
ကြင်နာခြင်းများ ထားခဲ့လို့ ..... ရင်ခွင်ကို မင်းဝင်လာခဲ့တာ
အချိန်ရှိတိုင်း အမြဲမင်းလေး အတွက်...ကိုယ်နာကျင်စွာ စောင့်မျှော်နေဆဲပါ
အချစ်ဆုံးရဲ့ နံဘေးမှာ...ရင်ခုန်ချင်မိတဲ့ အဖြစ်တွေများစွာ
ဒီအချိန်မှမင်း ကြည်နူးခြင်းများနဲ့ ရင်ခွင်တစ်ခုမှာ ပျော်မြူးလို့နေလဲ
မင်းလေးမရှိတဲ့ ဒီရင်မှာ မျှော်လင့်ဆဲပါ.......
နာကျင်လွယ်တဲ့ နှစ်လုံးသားကြားမှာ ဒဏ်ရာများစွာ သူထားရစ်ခဲ့လည်း
မမြင်နိင်တဲ့ အဝေးဆုံးကို ထွက်သွားပါရစေ
( ငါဟာမင်းမရှိတဲ့အဝေးမှာ တမ်းတနေဆဲ နာကျင်တဲ့ အလွမ်းရက်ရှည်များမှာ
ငါဟာ မင်းလေးရဲ့အဝေးမှာ တမ်းတနေဆဲ ရင်ခုန်သံများနဲ့ တစ်ယောက်တည်းပါ
ဘယ်လိုပင် ဝေး....သွားလဲ ရင်မှာအမြဲ မင်းတစ်ယောက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ အသင့်ပြင်ခဲ့)
မျှော်လင့်ခြင်းများ မရှိတော့လို့ ကမ္ဘာမြေတစ်ဖက်ဆုံးကို ကိုယ်ရောက်ချိန်
မင်းလေးအတွက် အလွမ်းတွေ ကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲ ပြည့်နေခဲ့ပြီ
နာကျင်ခြင်းများနဲ့ လောကအလယ်.......ခံနိင်ရေစွမ်းမရှိလို့ မင်းရဲ့အချစ်ကို မျှော်လင့်မိလို့
နာကျင်လွယ်တဲ့ နှလုံးသားကြားမှာ ဒဏ်ရာများစွာ သူထားရစ်ခဲ့လည်း
ဘယ်လိုပင် ဝေး....သွားလဲ ရင်မှာအမြဲ မင်းတစ်ယောက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ အသင့်ပြင်ခဲ့ )
Posted by ဆိုးသွမ်း at 8:02 AM5comments:
နေချင်တာ မင်းအနားမှာ - IMP
Song: နေချင်တာ မင်းအနားမှာ
ငါအချိန်တိုင်း နင့်ရဲ့ အနားမှာ
ဘာကိုမှ ငါမမျှော်လင့်ပါ နင့်အတွက်ပဲ…
တကယ်ကို ငါမင်းအနားမှာ နေချင်ပေမယ့်လည်းပဲ
အချိန်တွေသာ ဒီလိုနဲ့ လည်ပတ်ခဲ့
အချိန်တွေသာ ဒီလိုနဲ့ လည်ပတ်ခဲ့ပါပြီ…
ဘာကိုမှ ငါမမျှော်လင့်ပါ နင့်အတွက်ပဲ
Posted by Yan at 9:37 PM 1 comment:
အချစ်အယူခံ - ခင်မောင်ထူး
ရင်မှာ ချစ်အားလေး ညှိုးငယ်ရပါတယ်
အယူခံ ဒီစကားလေး ပြောပြတော့မယ်
အကြင်နာဆုံး ကိုယ့်ရဲ့ အချစ်ဆုံးရေ
ကြင်နာတဲ့ သူလေး ရှောင်ပြေးလေတော့
ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း ခုတော့ ကြေကွဲပြီ
ကြင်သူရေ ခေါ်သံလေး ကြားရင်
အချစ်ဟောင်းလေးကို ခဏလောက် လှည့်လို့ကြည့်ပါဦး
ကြေပါတော့ အချစ်ဦး ရန်ငြှိုးတွေရယ်
Posted by Yan at 8:32 PM No comments:
Labels: Khin Mg Htoo, ခင်မောင်ထူး
ခံစားပေးပါ - ဖိုးကာ
အချစ်ရဲ့အလှတရား… အို မင်းမြင်နိုင်မလား
အကြင်နာမနက်ခင်း မင်းအခန်းဆီ ယူဆောင်ခဲ့မယ်
ပြန်ပြီး နိုးထမယ့် အခိုက်အတန့်လေးထဲ
ဟူး… ရင်ခွင်အသစ်ထဲ ၀င်လာခဲ့
Posted by Yan at 8:20 PM No comments:
Labels: Pho Kar, ဖိုးကာ
လှမ်းခဲ့တော့ အချစ်ငှက်ငယ်ရယ် ငါ့ရဲ့နှလုံးသားပေါ်ခိုနားကွယ်
လှမ်းခဲ့တော့ အချစ်ငှက်ငယ်ရယ် ငါ့ကိုအချစ်နဲ့စီရင်ပေးကွယ်
လွှမ်းခြုံစေသောအရာ မတွေ့ရှိခဲ့ မသိရှိခဲ့တာလား
တကယ်ဆိုငါဟာ ဘ၀ဆိုသော အသက်ရှင်ရုန်းကုန်ရခြင်း အဓိပ္ပာယ်တွေထဲမှာ
လှမ်းခဲ့တော့ အချစ်ငှက်ငယ်ရယ် ငါ့ရဲ့နှလုံးသားကို အသက်သွင်းကွယ်
လှမ်းခဲ့တော့ အချစ်ငှက်ငယ်ရယ် ဘ၀ကိုငြိမ်းချမ်းစွာဖြတ်သန်းမယ်
Posted by Winkabar at 6:47 PM 1 comment:
မိုက်တယ် နားထောင်ကြည့်လိုက်ပါလား ပြီးမှကြိုက်မကြိုက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပေါ့
Posted by ရက်ရာဇာ at 12:45 AM No comments:
Vocalist: Nik and Jay
Song: Hvad nu Hvis
ဒိန်းမတ်သီချင်းလေးပါ.... ဒီအချိန်သာဖြစ်ရင် လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် ကလေးတစ်ယောက်အတွက် ဘ၀သီချင်းလေးပါ.....
Hvis jeg var et sejlskib på det åbne hav,
var hun vinden, der tog mig hjem.
Hvis jeg var en kornmark,
var hun sommerregn, der endelig kom igen.
Og hvis jeg var en storby,
var hun energien, der gav mig liv og lys nu.
Og hvis jeg var7år igen,
var hun sneen, der faldt uden for mit vindue.
Hun betyder alt for mig,
lad det aldrig vende.
Hun er mit et og alt,
jeg vil ikk' stå alene.
Så hvad nu hvis stjernerne en dag var væk,
og hvad nu hvis vinden døde stille hen.
Og solen aldrig mere ville vise sit ansigt.
Hvad sku' jeg så gør'?
Og hvad nu hvis sneen smeltede bort,
og hvad nu hvis regnen udeblev.
Hvad nu hvis alting blev helt sort.
Jeg håber det aldrig sker, jeg har brug for dig her.
ohoh, oh oh oh oh oh oh. ohoh, oh oh oh oh oh oh.
Hvis jeg var en sommerfugl,
så var hun solens stråler, der varmede mine vinger.
Hvis jeg var faret vild i skoven,
var hun stjernerne for oven, der viste mig vej, min sti finder.
(Jay) Det' mit liv, jeg nyder showet. Jeg ved, at det lyder flovet,
men jeg har ting jeg vil gøre før min tid er gået.
Det er de ting jeg kan vide, at der betyder noget.
Hey stjerne i det fjerne, hvis mig vejen jeg følger den gerne.
Vi gjorde det, vi er her. Det der ikke slog os ihjel, gjorde os stærkere.
(Nik) Nik, yo. Lad mig kæmpe lidt, elske lidt. Jeg er her jo kun for et øjeblik.
Før tidevandet vasker det hele væk, vil jeg skrive for mig og mine,
og jeg prøver på at skrive for dig og dine,
for der er ingen, der fortjener at leve alene.
Posted by သွင်မောင် at 12:21 AM No comments:
Labels: Nik and Jay
Vocalist: ဂရေဟမ် + ချောစုခင် + တင်ဇာမော် + မီးမီးခဲ
Song: အပြုံးတုရဲ့ အမုန်း
အပြုံးတုလေးအားစွဲလမ်းမိတာ တကယ်ကို သိပ်မှားသွား
နှုတ်ခမ်းပါးလေးရဲ့ နှိပ်စက်မှုဟာ ဒဏ်ရာတွေပဲလား
မင်းပေးခဲ့ အိပ်မက်လေးတွေလည်း အခါခါကြေကွဲ
ဟေးး ဘေးဘီ ရက်စက်တဲ့အမုန်းတွေလေ
ဟေးး ဘေးဘီ အပြုံးတုရဲ့အမုန်းတွေလေ
လေထဲလွင့်မျောပျောက်ကွယ် အပူဆုံးမီးတွေထဲ ထားရစ်ခဲ့သူရယ်
Posted by Winkabar at 10:19 AM No comments:
Labels: ဂရေဟမ်, တင်ဇာမော်, မီးမီးခဲ, ချောစုခင်
Posted by ရက်ရာဇာ at 2:54 AM No comments:
နားထောင်ကြည့်ပါ ကြိုက်မယ်ထင်တယ် ဗျ။
Posted by ရက်ရာဇာ at 11:24 PM No comments:
တားမြစ်ထားလည်း ဆုံးဖြတ်ပြီး မင်းအဝေးကြီးသွားလိုက်တော့
အားလုံးအကောင်းဆုံးမင်းလေးအတွက် ငါကြိုးစားနေတုန်း မုန်းလိုက်
မင်းလောက်တို့က မချစ်ခဲ့လို့မဟုတ်ဘူး သိရဲ့လား
အချိန်တွေက ပြောပြသွားမှာပါ မင်းကိုသိပ်ချစ်ခဲ့တဲ့
နာကျင်အသည်းကွဲရတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ဖြစ်ရပ်များကို
နောက်မှသိမယ် တို့ရဲ့အချစ်တွေ အဆုံးအဖြတ်မှားတွေ ဆက်တိုက်လုပ်ကာ
အပိုင်းပိုင်းအစစ ကျိုးပျက်သွားတဲ့နေ့တစ်နေ့ အဆိုးဆုံးအချိန်လား
နေရောင်မရှိတဲ့ကိုယ့်နေ့တွေ မင်းအဝေး ကမ္ဘာမြေမှာ အမှောင်တွေသာနေရာယူ
အချစ်မရှိတော့တဲ့နေ့များ တစ်စက္ကန့်လောက်မှ တို့ကမပျော်ဘူး
ရင်မှာ နှောင်ဖွဲ့ကြိုးကလေးတွေ ပြတ်တဲ့အချိန်ရောက်
အိုး… အခုတော့ တို့မိန်းမသားဘ၀ ဒါကို မင်းနားမလည်ပဲ
ဟေး စွပ်စွဲလိုက် ကိုယ်ဟာမင်းအချစ်နဲ့မထိုက်တန်ခဲ့
မင်းလောက်တို့က မချစ်ခဲ့မိပါဘူးတဲ့လား အူး… မင်းအမှား
နာကျင်အသည်းကွဲရတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်တွေပေါ့
အရာရာကိုချိုးဖျက်လိုက်တဲ့နေ့ နေရောင်မရှိတဲ့ကိုယ့်နေ့တွေ မင်းအဝေး
ကမ္ဘာမြေမှာ အမှောင်တွေသာနေရာယူ အချစ်မရှိတော့တဲ့နေ့များ
တစ်စက္ကန့်လောက်မှ တို့ကမပျော်ဘူး အချစ်မရှိနေ့ရက်များ
နာကျင်အသည်းကွဲရတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်ပေါ့
နောက်မှသိမယ် တို့ရဲ့အချစ်တွေ ထားသွားအချစ်ရေ ထားသွား
အချစ်တွေမရှိတဲ့နေ့မှာ မင်းအဝေး ကိုယ့်အသည်းတွေဆက်လို့မရတော့
တစ်စက္ကန့်လောက်မှ ကိုယ်မပျော်ဘူး ဆွေး
Posted by Winkabar at 7:39 PM No comments:
ဟိုအရင်ထိုစဉ် လိုအင်ဆန္ဒနည်းပါး အလွတ်လပ်ဆုံးပင်
တကယ်မမေ့သေးဘူး ဝေးပြီ တစ်ချိန်က ကျောင်းတက္ကသိုလ်
အချိန်တွေထဲစီးဆင်းပါ ငယ်သူများကြီးပြင်းလာစေ လွမ်းနေဆဲပါ မြကျွန်းညို
ပညာရင်နို့တိုက်ကျွေး အိုပျိုးထောင်လို့ပေး ဒီရင်မှာခိုလှုံချိန်တွေ မေ့မရလို့
မဆုံနိုင်တဲ့အဝေးကနေ မကုန်နိုင်တဲ့ကျေးဇူးတွေကိုလွမ်းနေဆဲပါ မြကျွန်းညို
တစ်မြေစီ တစ်နယ်စီ တာဝန်ကိုယ်စီဘ၀ရဲ့ခရီးလမ်းများတွင်ပြန်လည်မဆုံပြီ
ဒီနယ်မြေကိုအဝေးကတမ်းတလို့ပင် နှစ်ခါပြန်မရဘူး ဝေးပြီ တစ်ချိန်ကကျောင်းတက္ကသိုလ်
Posted by Winkabar at 7:56 AM No comments:
ကျွန်တော့်ချစ်သူကို ဆိုရင်တော့ ဒီသီချင်းလေးတီးပြမယ်ဗျ။ ဒီနေရာလေးလေ
`ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ လက်ဆောင်တစ်ခုကွယ် မင်းကိုပေးမယ် ယူမလားအချစ်ရယ် ဟောဒီ ပုခုံးရယ် ဒီဦးနှောက် နဲ့ မင်းကိုချစ်တဲ့ ဒီနှလုံးသားရယ်´
Posted by ရက်ရာဇာ at 2:18 AM No comments:
ဖြည်းဖြည်းချင်း ကိုယ့်မျက်စိအောက်မှာ ပန်းချီကားတချပ် ရုပ်လုံးကြွလာတယ်......
Posted by ရက်ရာဇာ at 2:02 AM No comments:
တကယ်ပါ ကံကြမ္မာကြောင့် ဆိုတာကြီးကို ကျွန်တော်က တော့လက်မခံနိုင်ပါဘူး ဒါ့ကြောင့် ကံကိုပုံမှာစိုးရိမ်လို့ ပါ။
Posted by ရက်ရာဇာ at 2:04 AM No comments:
ငါရဲ့ချစ်တဲ့ ချစ်သူလေးကို ရိသဲ့သဲ့တော့လာမစကြနဲ့ ငါဟာ ပန်းပွင့် စောင့်တဲ့ဘီလူးမို့ အဆိတ် ပြင်းတယ်
ငါရဲ့ချစ်သူ သွားတဲ့ လမ်းမှာ ဆူးညှောင့်ခလုတ်ဆို အကုန်ရှင်းပစ်မှာ ငါဟာအချစ်ကြိ်မ်စာသင့်ဘီလူးမို့.....................
Posted by ရက်ရာဇာ at 6:22 PM No comments:
မင်းမျက်နှာလေးအား မြင်ရတဲ့ အချိန်မှာ အရာရာဟာ မင်းလက်မှာ
Posted by ရက်ရာဇာ at 2:35 AM No comments:
Posted by ရက်ရာဇာ at 2:11 AM No comments:
တီးပြီးသား တီးလုံးတွေ ပြန်မတီးချင်.........
Write the rest here...
Posted by ရက်ရာဇာ at 1:18 AM No comments:
AD3000 ထဲက သီချင်းဖြစ်ပါတယ်။
Posted by ရက်ရာဇာ at 1:06 AM No comments:
Song: Listen Song
နာမည်တော့မသိဘူး။ နားထောင်ရင် လွမ်းဖို့တော့ကောင်းတယ်။ နာမည်သိရင် ပြောပေးနော်။
တစ်ယောက်ယောက်ကတီးမယ့် အိမ်ရှေ့ခေါင်းလောင်းသံ လာနေကျတစ်ယောက်အတွက် ကိုယ်မျှော်နေတုန်းပဲ တစ်ယောက်ယောက်က ညနက်အချိန် ဖုန်းဆက်ခဲ့ရင် သူတစ်ယောက်တည်းကိုယ်ထင်တုန်းပဲ
ရည်းစားလက်မဲ့ တစ်သက်တာ အချစ်လက်မဲ့ ဖြစ်တောင် ဒီအချိန်ထိကိုယ့်အတွက်ေ၀၀ါးဆဲ မရည်ရွယ်ပဲနဲ့ ကိုယ်အိမ်ရှေ့လမ်းမှာ သူလာဖို့ငေးတုန်းပဲ
အချိန်ဆိုတာ အဆင်မပြေသူအတွက်ကုန်ခဲလွန်းပါရဲ့ အချစ်က ကံစီမံတဲ့အတိုင်းလေ သေရာပါဒဏ်ရာတွေနဲ့ထားခဲ့သူအတွက် အရှုံးနဲ့ကျန်နေသူတော့ရှိမယ်
တစ်ယောက်ယောက်ကပြောလို့နင်သတိရသေးရင် ပြန်လာခဲ့ပေါ့လို့ ခေါ်ပစ်မယ် တစ်ယောက်ယောက်ကမေးလို့နင်မှတ်မိသေးရင်မရေရာတဲ့ခြေ
ရည်းစားဟောင်းများအကြောင်းပြန်ပြောဖြစ်တဲ့အခါ လူတွေကြားထဲက ကိုယ်ရှောင်နေတတ်ခဲ့
လိုနေသောသူ့အတွက် ကိုယ်ငိုခဲ့ဖူးတာ အပြင်လူတွေပေးမသိနဲ့
တစ်ယောက်ယောက်ကတီးမယ့် အိမ်ရှေ့ခေါင်းလောင်းသံ လာနေကျတစ်ယောက်အတွက် ကိုယ်မျှော်နေတုန်းပဲ တစ်ယောက်ယောက်က ညနက်အချိန် ဖုန်းဆက်ခဲ့ရင် သူတစ်ယောက်တည်းကိုယ်ထင်တုန်းပဲ တစ်ယောက်ယောက်ကပြောလို့နင်သတိရသေးရင်
ပြန်လာခဲ့ပေါ့လို့ ခေါ်ပစ်မယ် တစ်ယောက်ယောက်ကမေးလို့နင်မှတ်မိသေးရင်မေ
Posted by Winkabar at 9:55 AM No comments:
Posted by ဆိုးသွမ်း at 4:29 AM No comments:
Vocalist: စောညီညီ (Toobig)
တစ်လတစ်လ မျှော်လိုက်ရတဲ့ နေ့တနေ့အကြောင်း ရေးထားတာပါ။ ကျွန်တော်တိ်ု့လို လခစားဝန်ထမ်းတွေ အတွက်တော့ ဒီသီချင်းက တော်တော် တိုက်ဆိုင်မှုရှိတယ်ဗျာ။
`စောင့်တစ်လ၊ ထုတ်တရက်၊ သုံးတစ်ပတ် တဲ့ ကောင်းလိုက်တဲ့ စာသား တကယ် မိုက်တယ်´
Posted by ရက်ရာဇာ at 10:39 PM No comments:
Vocalist: Three Days Grace
Vocalist: Secondhand Serenade
Song: Your call
Posted by Z at 8:20 PM No comments:
Stay Close Don't Go - Secondhand Serenade
Song: Stay Close Don't Go
I'm staring at the glass
If I ruined all
Have I ruined all you've given me
I know I've been selfish
I know I've been foolish
That I'll do better
I'll wake up alone
Will sink 'til it dies
Sometimes I stare at you
Amazed how I somehow
Sweep you off of your feet, girl
Your perfect little feet, girl
My heart is pumping hope
It's putting out the fight
That evertything's alright
Posted by Z at 8:08 PM No comments:
Posted by ရက်ရာဇာ at 8:17 PM No comments:
Vocalist: Wan Li Hong
Song: ဒီမှာ :P
အောက်က Lil ကောင်းမြတ်ရဲ့ တရုတ်ဗားရှင်း ပါ.. ၂ ခုလုံးနာထောင်လို့ ရအောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Posted by နှင်းပွင့်ဖြူ at 10:26 AM No comments:
Vocalist: Lil ကောင်းမြတ်
သီချင်းနာမည်မသိဘူး ( သိရင်ပြောသွားပေးနော်းP )
မင်းရဲ့ ဆံနွယ်တွေ လေမှာလွင့်နေတယ် ညင်သာစွာ နမ်းရှုက်ခွင့် ရချင်လည်း
တကယ်ဆိုရင် ဝေးဝေးကလှမ်းကြည့်ပြီး ရင်ထဲ နူးညံ အနမ်း လွမ်းနေရုံလေးပဲ
အိုး....... အိမ်မက်သာဆိုရင် ပြန် ငြိမ်နေလိုက်ပါမယ်
ကြာလာရင် နာကျင်မယ် ငါသိတယ်
( အဲ့ သလို ဆို ထားတယ် :D )
Posted by နှင်းပွင့်ဖြူ at 10:18 AM 1 comment:
Labels: Lil ကောင်းမြတ်
थिस इ प्रोमिसे You
Song: थिस इ प्रोमिसे You
Start your intro here.... एवेर्य्वोर्ड I से इस true
Write the rest here... This I promise you
Posted by OZi at 2:34 AM No comments:
Vocalist: The Ants(band)
မင်းရဲ့ အဆိပ်သောက်လို့ ငါဟာ မင်းတွန်းမယ့် ချောက်နက်ထဲဆင်းလို့
မင်းရဲ့ ရှေ့မှောက် ဒူးထောက် ထင်တာ ငါ့ဘ၀က ချစ်သူရဲကောင်း
အဆုံးသတ်မှ ရိပ်မိတဲ့ ဘ၀ ငါဟာ နောက်ကျတဲ့ ငတုံးငအ
ကန်းလွန်းလို့ရတဲ့ ၀ဋ်ဒုက္ခ ဘယ်လိုလဲ စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းတဲ့ အချစ်က
ငါ့ရဲ့ အသည်းကို သော့ခလောက် တစ်ခုလို နင်ခတ်သွား / အမြတ်ထုတ်ရောင်းကာ နင်ထွက်ပြေး
နင်ရယ်ရင် ရယ်သံတွေကို ရွံတယ် ပြန်ပါတော့ကွယ် နင် ကြင်နာတာတွေဟာ ညှီစော်နံတယ် ငါအန်မိမယ် နင်လိမ်တာ ညာနေတာ သေချာတယ် ငါသေတော့မယ် သိပ်မိုက်တဲ့ မှားယွင်းမှုချစ်ခဲ့ခြင်းပဲ ငါသိပ်မှားတယ်
Posted by PMK at 10:49 PM No comments:
Labels: The Ants
မျက်လုံးတွေမှိတ်လိုက်တိုင်းကိုမြင်နေတာက ဖြစ်ရပ်မှန်တွေ နဲ့ပဲ။
သတိရလို့တိုက်ခန်းအောက်ကို ကား၃စီးနဲ့လာခဲ့တာလဲ (ကျွန်တော်ကတော့ ကား၁စီးနဲ့တောင်မလာနိုင်ပါဘူး လမ်းလျှောက်ပဲသွားတယ်)
နားဆင်ကြည့်ပါ ခံစားချက်ချင်းတူရင်တော့ ကြိုက်ကြမှာပါ.။
Posted by ရက်ရာဇာ at 10:48 PM No comments:
မနက်ခင်းဆိုလည်း လာမနှိုးနဲ့ အိပ်ရာထဖို့ပျင်း ပျင်းလွန်းလို့ မင်းနဲ့ အပျင်းပြေ ရည်းစားထားဖို့ပျင်း မွေးစကလေးထဲက မျိုးနဲ့ရိုးနဲ့ပျင်း စားဖို့ပျင်း အိပ်ဖို့ပျင်း ငါ့မှာ ချစ်ရမှာလဲ ပျင်း ငပျင်း
ခေါက်ထားလိုက် ဆုံးမစကားတွေ နားထောင်ဖို့အတွက် ပျင်း ခေါင်းကိုက်တဲ့ ဒဿနနဲ့ ဘ၀ကို ဖြုန်းတီးပစ်ဖို့ ပျင်း
အလုပ်နဲ့ နဘန်းလုံးကြတဲ့ လောကကြီးကို ပျင်း နေဖို့ သေဖို့ပျင်း ငါ့မှာ ပျင်းရမှာကိုပျင်း
သိရဲ့သားနဲ့ ပြောရခက်တဲ့ ကျွန်တော့်ဘ၀ကြီး ဘာမှမလုပ်ဘဲ ပျင်းရဖို့တော့ စံချိန်မှီ ကြာပါပြီ
ငပျင်း…….. ငပျင်း……….. ငပျင်း……….. ငပျင်း…………….
Posted by PMK at 10:45 PM No comments:
Vocalist: မျိုးကျော့မြိုင် Song: မင်းလေးချစ်တတ်ရင်...
Vocalist: မျိုးကျော့မြိုင် Song: ပြောခွင့်ပြုပါမိန...
Vocalist: Lil ကောင်းမြတ် Song: ဒီမှာယူ သီချင်းနာမ...